११ नि: शुल्क उच्च रिजोलुसन छविहरूको बैंकहरू | क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी प्रोजेक्टको साथ सामना गर्दछौं जसमा छविहरू आवश्यक पर्दछ, राख्नु अघि छविहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसो गरौं। मलाई थाहा छ यो उत्तम हुन्छ यदि हामी सबै कुरा कसरी गर्ने र राम्रोसँग जान्दछौं, तर यो सामान्य छैन वा समय वा साधनको अभावका कारण हो। पक्कै पनि तपाईं गर्न सक्नुहुन्न, वा कमसेकम सँधै, तपाईंको परियोजनाहरूमा थप्नको लागि आदर्श छविहरू सिर्जना गर्न वा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईं या त पेशेवर फोटोग्राफर राख्नुहुन्छ वा सिधा अनलाईन बैंकबाट छविहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ नि: शुल्क मोडेलिटीहरू र प्रीमियम मोडलिटीहरू छन्। यद्यपि प्रीमियम बैंकहरूको छविहरू प्राय: प्रस्तुत गर्दछ थप गुणस्तरयो सत्य हो कि भर्खरै, धेरै उच्च गुणस्तरको सामग्री भएको छवि बै appear्कहरू देखा पर्दै छन् र उनीहरूसँग प्रीमियम बै en्काहरूलाई ईर्ष्या गर्ने धेरै कुरा छैन। आज म तपाईंसँग कुनै पनि अधिक ११ वटा भन्दा कम बैंकहरूको चयन साझेदारी गर्न चाहन्छु। ध्यान देउ!
2 Foodie फिड
3 नयाँ पुरानो स्टक
5 सानो दृश्यहरू
8 म खाली छु
9 स्टक फोटोको लागि मृत्यु
10 सार्वजनिक डोमेन अभिलेखहरु
यस पृष्ठमा तपाइँ हप्ता7नयाँ र पूर्ण निःशुल्क छविहरू पाउनुहुनेछ। तिनीहरू शून्य इजाजतपत्रप्राप्त छन्, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि उपयोगको साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू उत्कृष्ट गुणका छन् र ती मध्ये तपाईं परिदृश्य देखि चित्र वा दैनिक दृश्यहरू सबै पाउनुहुनेछ।
यो बैंक खाना र पकाउने प्रक्रियाको उच्च रिजोलुसन छविहरूमा विशेष छ। यसमा, प्राय: पाँचवटा छविहरू हप्तामा अपलोड गरिन्छ र धेरै अवसरहरूमा समान दृश्य वा प्लेट विभिन्न कोणबाट लिइएको प्रस्ताव गरिन्छ। खाद्य व्यवसायका लागि उत्कृष्ट। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बैंक हो, यसले Paypal मार्फत चन्दा दिने सम्भावना प्रदान गर्दछ।
धेरै रोचक यदि तपाईं रोयल्टी-मुक्त छविहरू खोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ जुन ऐतिहासिक मूल्य वा तौल छ। नयाँ पुरानो स्टॉकले दुबै मौलिक निःशुल्क र रोयल्टी-मुक्त छविहरू र नयाँ छविहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको सम्झौताको अन्तमा जारी गरिएको छ। यसले हामीलाई प्रदान गर्ने दायरा धेरै फराकिलो छ र यसको छविहरू बीच हामी धेरै क्लासिकहरू भेट्टाउँछौं जुन दावी र विज्ञापनहरूमा प्रयोग गरिएको थियो।
हामीले यस अवसरमा उल्लेख गरिसकेका छौं। यस बैंकमा १० चित्रहरू प्रत्येक दश दिनमा अपलोड गरिन्छ। बिभिन्न पेशेवर फोटोग्राफरहरू भाग लिन्छन् र उनीहरूका विषयवस्तुहरू सबै भन्दा माथि छ, शहरी र प्राकृतिक परिदृश्यहरू र दैनिक जीवनका दृश्यहरू। उसको आदर्श वाक्य हो "तपाईको फोटोको साथ तपाई के चाहानुहुन्छ गर्नुहोस्, प्रयोग गर्न अनुमति नलगाउनुहोस्।" तिनीहरूसँग उच्च गुणवत्ता छ र हामीलाई कुनै पनि उद्देश्यको लागि यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहोस्। अत्यधिक सिफारिश गरिएको!
यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ हो तर यसले नेटवर्कमा स्थानहरू लिन सुरु गरिरहेको छ। यस बैंकले प्रत्येक हप्ता new नयाँ छविहरू समावेश गर्दछ जुन व्यक्तिगत रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ वा सदस्यतामा समूहमा ईमेल मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिनीहरू "क्रिएटिव्ह कमन्स" इजाजतपत्रको अधीनमा छन् त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका परियोजनाहरू र उद्देश्यहरूको लागि स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यसले उच्च रिजोलुसन छविहरूको एक विस्तृत विविधता समावेश गर्दछ सबै निःशुल्क इजाजतपत्र अन्तर्गत र दुवै व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि उत्तम। ती सबै मानिस, पशुहरू, वस्तुहरू र शहरद्वारा वर्गीकृत गरिएका छन्।
ढाँचा पहिलेको छवि बै in्कमा प्रयोग गरेको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। प्रत्येक प्रायः नयाँ उच्च रिजोलुसन छविहरू प्रकाशित र फरक पेशेवर फोटोग्राफरहरू द्वारा लिइन्छन्। यस बैंकको फोटोग्राफहरूमा त्यहाँ मोडेलहरू र व्यक्तिहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको छ, जुन मैले याद गरेको छु, उदाहरणका लागि अनस्प्लाशमा जहाँ सबै भन्दा माथि, परिदृश्य र वस्तु फोटोग्राफहरू प्रशस्त छन्।
यो वैकल्पिक एक उचित छवि बैंक हैन तर साथै अन्य स्वतन्त्र स्रोतहरू जस्तै आइकनहरू, बटनहरू वा ग्राफिक्सहरू छन्। यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाईं वेब परियोजनाको सामना गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंलाई विभिन्न क्षेत्रहरू कभर गर्नको लागि संसाधनहरू आवश्यक पर्दछ।
अघिल्लो मध्ये एक को रूपमा, हामी या त व्यक्तिगत तवरले हाम्रो लागि उपयोगी छविहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं वा हामी हाम्रो इनबक्समा डाउनलोड गर्न र प्रयोग गर्नका लागि उपलब्ध छविहरूको प्याकेजहरू प्राप्त गर्न सक्छौं।
सार्वजनिक डोमेन अभिलेखहरु
यस संग्रहमा यूएन को स्वामित्वमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार भएका छविहरू छन् तर प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन्। नयाँ सामग्री आवधिक रूपमा थपिएको छ त्यसैले यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईं यसमा एक नजर राख्नुहोला किनकि यस्तो सम्भावना छ कि तपाईंले एकदम चाखलाग्दो कार्य सामग्री पाउनुहुनेछ।
यो मेरो मनपर्ने विकल्पहरू मध्ये एक हो किनकि यसले विभिन्न किसिमका छविहरू राख्छ। केही स्थानहरूमा त्यहाँ फ्लिकर ब्रह्माण्डमा भन्दा धेरै छविहरू हुनेछन् र कम्प्याफाइट मार्फत हामी यसको खोज डेटाको डाटाबेसलाई खोजी ईन्जिनको माध्यमबाट पहुँच गर्न सक्षम हुनेछौं। प्रत्येक छविले स्पष्ट रूपमा प्रश्नको छविको इजाजतपत्रलाई दर्शाउँछ र तपाइँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » ११ नि: शुल्क उच्च रिजोलुसन छविहरूको बैंकहरू
जोनाथन हर्नान्डेज मार्टिनेज भन्यो
जोनाथन हर्नान्डेज मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, साँच्चै! ;)
एले हर्नान भन्यो
अत्यन्त उपयोगी! धन्यवाद :)
एले हर्नानलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद म एकदम अनुकूलन मन पराउँछु .. अभिवादन
एम्प्रोडमा जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद र यस्तो राम्रो विचार र कामको लागि बधाई!
Emilia लाई जवाफ दिनुहोस्